Manoloana ny fanapahan-kevitry ny Didec, miakatra ny feo anatin'ireo tambazotran-tserasera
Miakatra ny feo anatin’ireo tambazotran-tserasera manoloana ny fanambaran’ny Didec fa averina mianatra ireo mpianatra eny anivon’ny sekoly katolika manomboka ny Alarobia 25 oktobra ho avy izao, na dia eo aza ny pesta.
Samy maneho ny heviny manoloana ny fanambarana nataon’ny Didec, fivondronan’ireo sekoly katolika rehetra manerana ny Nosy, fa hiverina hianatra izy ireo manomboka ny Alarobia 25 oktobra ho avy izao, na dia eo aza ny aretina pesta. Maneho ny heviny ny tsirairay, indrindra ao anatin’ny Facebook. Misy ireo milaza ho faly manoloana ny fanapahan-kevitra, satria toa miendrika ho fanasaziana sy famotehana ny fampianarana ity tsy famelàna ny mpianatra hianatra ity, nefa ny fifamezivezena eny rehetra eny mitohy ihany. Efa ho iray volana mahery tokoa mantsy izay no nahato ny fampianarana. Misy kosa anefa ireo tezitra. Anisan’izany indrindra ireo ray aman-drenin’ny mpianatra amin’ireo sekoly katolika izay maro tokoa no milaza fa mandà io didy io ary tsy handefa ny zanany hianatra satria mety hahazo aretina any am-pianarana ilay zaza. Raikitra ny ady ao anatin’ny tambazotran-tserasera, ary samy miaro mafy ny heviny ny tsirairay. Adihevitra tsy ahitana vahaolana anefa izany satria ny samy mpisera indray no miady, ary hita taratra tanteraka anatin’ireo resadresaka ao anaty Facebook fa ny fitiavan-tena sy ny fomba fijery tsy mahitsy no tena mibahana. Tsy misy ny firaisan-kina fa fiarovana ny heviny bontolo fotsiny ihany no atao.
Ho an’ny ministry ny Fanabeazam-pirenena Paul Rabary kosa anefa, am-pahalalahana tanteraka hoy izy no nandraisan’ny Didec ity fanapahan-kevitraa ity. Tsy afaka hosakanana izy ireo, saingy hisy kosa ny fiofanana omena ireo tompon’andraikitra eny amin’ny sekoly katolika tsirairay ialàna amin’ny olana mety hitranga, rahampitso.